Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Sida Fudud Loogu Aqoonsado Safar Waara
Pioneering Travel Sustainable Program waa mid ka kooban dhammaan noocyada guryaha ee caalamka oo dhan wuxuuna u sahlayaa macaamiisha inay helaan macluumaadka waaraya ee lagu kalsoonaan karo.
Summada Joogtada ah ee Safarka, calaamad la aamini karo, caalam ku habboon oo cabbirka joogteynta ah oo siin doonta macluumaad aad loo xiiseeyo dadka socotada ah ee adduunka oo dhan ee raadinaya inay sameeyaan doorashooyin safar oo waara. Loogu talagalay in lagu dabaqo noocyo badan oo hanti ah, laga soo bilaabo dabaqyo, B&Bs iyo guryaha fasaxa ilaa hudheelada, meelaha lagu nasto iyo xataa guryaha geedaha, lana qabsan karo xaqiiqooyinka maxaliga ah iyo tixgelinta, hindisuhu waa noociisa ugu horreeya ee warshadaha.
Iyadoo la tixgelinayo in 64% dadka safarka ah ay sheegaan inay rabaan inay joogaan hoy waara sanadka soo socda iyo in ka badan 28 milyan oo liis ah oo ku yaal Booking.com, shirkaddu waxay u aragtaa fursad weyn oo ay ku soo bandhigto dadaal badan oo saameyn leh oo ay la-hawlgalayaasheeda ay qaadanayaan si ay u abuuraan waayo-aragnimo dheeraad ah oo waara, oo markeeda, waxay u fududaysaa socotada si ay u helaan hab waara oo ay ku joogaan. Iyadoo saddex-meelood meel (63%) ay muujinayaan inay aad ugu dhowdahay inay doortaan deegaan gaar ah oo fulinaya dhaqamo waara, waxay abaal-marin siinaysaa oo waxay sii dhiirigelinaysaa bixiyayaasha inay qaadaan tillaabooyinka xiga ee safarradooda joogtada ah.
"Dhisidda warshad safar oo dhab ah oo waara waxay qaadan doontaa waqti, isku-dubarid iyo dadaal wadajir ah, laakiin horumarka ayaa suurtagal ah iyada oo loo marayo hal-abuurnimo joogto ah, taageerada lammaanaha iyo iskaashiga warshadaha," ayuu yiri Marianne Gybels, Agaasimaha Joogtada ee Booking.com. "Waxaan u aqoonsanaynaa dadaalka joogtada ah ee hanti aad u ballaaran oo adduunka oo dhan ah si la aamini karo oo daah-furan macaamiisha. Soo bandhigida dhaqamada ay ku dhaqmaan waxay u sahlaysaa qof walba inuu sameeyo xog xog ogaal ah oo rajo laga qabo inuu sameeyo doorasho waara safarkooda xiga, iyada oo aan loo eegin meesha ay rabaan inay aadaan. Markaa sidoo kale dhiirigelinaya xitaa in badan oo ka mid ah asxaabtayada si ay u qaadaan tallaabada xigta si ay ugu shaqeeyaan si waarta”.